IMIBALA EHAMBA NOMGANGATHO OGREY - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imibala Ehamba noMgangatho oGrey
Imibala Ehamba noMgangatho oGrey
Apha sabelana ngemibala ehamba nemigangatho engwevu ukukunceda wenze uyilo lwangaphakathi olugqibeleleyo.
Imigangatho engwevu iba yinto eshushu kuyilo lwanamhlanje. Imigangatho engwevu ingenziwa ngamatye, i-laminate, ukhuni olunamabala okanye ikhaphethi ukubala nje ezimbalwa. Ngaphezulu kwayo kunokubakho ityali okanye iintlobo ezahlukeneyo zemethi.
Grey kulula ukulungelelanisa kuba ngumbala ongathathi hlangothi. Ukukhetha umbala ongathathi hlangothi kumgangatho ovulekileyo kuvula ithuba lefanitshala, ukuhombisa kunye nomsebenzi wobugcisa wokukhanya kunye nemibala emininzi. Umgangatho ongwevu ungasetyenziselwa kakhulu nakuphi na ukubekwa kubandakanya: amagumbi okuhlala, izindlu zangasese, iikhitshi, njl.
Ukutshatisa uMgangatho oGrey kunye neeNdonga
Yeyiphi imibala eya kuMgangatho oGrey oKhanyayo?
Kubalulekile ukuba uchonge ukuba loluphi uhlobo lwegrey onalo apha emgangathweni. Nokuba kukho ithoni epholileyo okanye efudumeleyo engwevu ukuze wazi ngokufanelekileyo ukuba ungalungelelanisa ntoni ungazama ukusebenzisa usetyenziso lwepeyinti ukunceda ukutshatisa umbala wakho kunye nokufumana ezinye ezincomekayo. Ezinye zeeseti zemibala onokuzisebenzisa zichazwe apha ngezantsi.
Ukungathathi hlangothi yinto enokusebenza kuyo nayiphi na indawo, ngakumbi kumgangatho ongwevu. Ukusebenzisa umnyama omnyama okanye okhanyayo wegrey kunomgangatho ongaphantsi kunokunceda ekudaleni ubukhulu ngaphakathi kwendawo.
Ukuxuba abanye abamnyama nabamhlophe banokongeza i-pop engathathi hlangothi kwisithuba xa i-flooring ingwevu. Bona Okuninzi iikhitshi ezingwevu nezimhlophe Apha.
Ukudibanisa iindonga ezingwevu kunye nemigangatho engwevu kunika ukuziva okuthambileyo nokukhanya kwindawo - ukongeza ukukhanya kokuhonjiswa ngayo kunokuyicoca ngelixa ugcina uyilo lukholisa kuye nabani na onokusebenzisa indawo. Ukungathathi hlangothi okulula kunika ukuziva uthambile ngakumbi, ngelixa mnyama kunika inkangeleko ephucukileyo kunye nepholileyo.
Ikhitshi ngeekhabhathi ezingwevu kunye nomgangatho wekhonkrithi ongwevu.
Ikhitshi elineekhabhathi ezimhlophe, isiqithi esimdaka ngombala omnyama kunye neethayile zomgangatho ongwevu.
Ikhitshi elinesiqithi esingwevu , iikhabhathi ezimhlophe, ipeyinti yodonga engwevu kunye nomgangatho.
Ikhitshi lokuvula kunye negumbi lokutyela elinepeyinti eluhlaza eluhlaza kunye nomgangatho wekhonkrithi ongwevu.
Sebenzisa ii-beige kunye nee-browns aziqhelekanga kucetyiswa xa kudityaniswa negrey epholileyo. Nangona kunjalo, ukusebenzisa i-grays eshushu, kunye ne-greiges lukhetho olufanelekileyo lokumatanisa ngemibala ye-beige kunye nebrawuni. Le mibala inokusetyenziswa ebumnyameni nakwizibane okoko nje igrey ineetoni ezifudumeleyo. Oku kubandakanya ukudibanisa kunye neenkuni kunye namatye ahlala ekhupha kwimbonakalo eshushu.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili emva kokwazi iithoni ezingwevu, i-grays ezipholileyo zilungile ngeethoni ezipholileyo. I-Blues, i-Purple, kunye nemifuno (kunye nayo yonke imibala ephakathi) yimibala epholileyo kwaye inokudityaniswa kakuhle ngombala ongwevu. Iithoni ezipholileyo zihamba kakuhle kakhulu ngeentlobo ezahlukeneyo zesinyithi nakuphi na ukugqitywa kwendwangu. Le mibala ixutywe nee-grays inika indawo ezolileyo kwaye igcina imimoya inyukile. Igumbi lokuhlambela elinomgangatho wegrey penny kunye nepeyinti yodonga oluhlaza okwesibhakabhaka.
Iikhabhathi ezipeyintiweyo eziluhlaza okwesibhakabhaka ezenziwe ngegrey herringbone tile flooring.
Eli khitshi linomxube wemibala engathathi hlangothi kunye neetoni ezipholileyo kuyilo lwangaphakathi. Umgangatho wethayile ongwevu wanconywa ziikhabhathi ezimhlophe zekhitshi ezineekhabhathi ezisisiseko sesiqithi kunye nepeyinti yedonga nesiqithi kunye ne beige.
Imibala efudumeleyo enje ngombala obomvu, orenji kunye namthubi asetyenziswa kakuhle xa kufudunyezwa umbala ongwevu wombala. Ngelixa oku kuhlala kunjalo, kukho iimeko ezithile apho umntu anokujonga imvakalelo yokuthelekisa. Oku kufezekiswa ngokusebenzisa imigangatho epholileyo kunye neetoni ezifudumeleyo ezishushu njengee-accents. Oku kuyacetyiswa ngeorenji kwaye ngumahluko oluhlaza okwesibhakabhaka oqhele ukuba sisiseko segrey epholileyo epholileyo.
Igumbi lokulala lokulala elinekhaphethi engwevu kunye neorenji udonga lwesandi .
Udonga lweorenji eorenji kunye nomgangatho wekhonkrithi ongwevu.
Iithowuni ezifudumeleyo zihamba kakuhle ngomthi wendalo kunye neenkuni zijongeka ngokufanayo kuyo nayiphi na into engagqitywanga. Le mibala ixutywe ngwevu efudumeleyo kunye neenkuni zinika ukuziva okucocekileyo kunye nokuqina kwindawo.
jay-z igama lokwenyani
Ukutshatisa i-grey flooring yakho kwiindonga zakho khetha ipeyinti emthubi engacacanga efanayo okanye umbala okhanyayo kwiziphumo ezilungileyo. Oku kuyakunceda ukuthintela indawo ekubonakaleni kumnyama kakhulu. Eminye imibala yodonga esebenza kakuhle ngombala ongwevu yintlabathi, ubusi, luhlaza ocacileyo kunye namthubi otyheli. Zama ukunqanda ukusebenzisa umhlophe omsulwa kuba kunokuba kuninzi kakhulu umahluko.
Ukukhanya okuqaqambileyo kwemigangatho yaphantsi iyadibanisa enkulu kunye neepeyinti zombala ofudumeleyo ezinje ngekhrim kunye ne beige. Ukuziva ungowesilisa okwangoku zama ukusebenzisa ithoni yesilivere.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nemibala ehamba nomgangatho ongwevu ekhitshini, jonga kwiphepha lethu iikhabhathi ezingwevu zekhitshi ezinemibala yokusebenza kwengqondo .
Nksk. Nks. ndiphose